कुकी नीति - नेटवर्क रेडियो
घर / कुकी नीति
यस साइटलाई राम्रोसँग काम गर्नको लागि, हामी साना डेटा फाइलहरू राख्न सक्दछौं तपाईंको उपकरणमा कुकीज। अधिकांश वेबसाइटहरूले यो गर्छन्।
कुकी एउटा सानो टेक्स्ट फाईल हो जुन वेबसाइटले तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणमा बचत गर्दछ जब तपाईं साइट भ्रमण गर्नुहुन्छ। यसले वेबसाइटलाई तपाईंको कार्यहरू र प्राथमिकताहरू सम्झन सक्षम गर्दछ (जस्तै लगईन, भाषा, फन्ट आकार र अन्य प्रदर्शन प्राथमिकताहरू) समय अवधिमा, ताकि तपाईं तिनीहरूलाई पुन: प्रविष्ट गर्न जारी राख्नुपर्दैन जब तपाईं साइटमा पुन: फर्किनुहुन्छ वा एउटा पृष्ठबाट अर्कोमा ब्राउज गर्नुहोस्।
हाम्रो साइटको भ्रमण गरेर कुन कुकीहरू सेट गरिएको छ?
सामाजिक वेबसाइट कुकीज
त्यसैले तपाईं सजिलैसँग "लाइक" गर्न सक्नुहुन्छ वा फेसबुक र ट्विटरको मनपर्दोमा हाम्रो सामग्री साझेदारी गर्न हामीले हाम्रो साइटमा साझेदारी बटनहरू समावेश गर्दछौं।
यसमा गोपनीयता निस्क्रिय पार्नाले सोशल सञ्जाललाई सोशल सञ्जालबाट भिन्न हुनेछ र तपाईंले यी सञ्जालहरूमा छनोट गर्नुभएका गोपनीयता सेटिङहरूमा निर्भर हुनेछ।
साइट सुधार कुकीज
हामी नियमित रूपमा हाम्रो साइटमा नयाँ डिजाइन वा साइट सुविधाहरू परीक्षण गर्दछौं। हामी विभिन्न व्यक्तिलाई हाम्रो वेबसाइटको केही फरक संस्करणहरू देखाउँदै र अज्ञात रूपमा हाम्रो साइट आगन्तुकहरूले यी फरक संस्करणहरूमा प्रतिक्रिया कसरी देखाउँछन् भनेर अनुगमन गर्दछौं। अन्तत: यसले हामीलाई तपाइँलाई राम्रो वेबसाइट प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
पर्यटक तथ्याistics्क कुकीहरू
हामी कुकीहरू पर्यटक तथ्या comp्कहरू कम्पाइल गर्न प्रयोग गर्दछौं जुन हाम्रो वेबसाइटले कति जना भ्रमण गरेका छन्, उनीहरू कस्तो प्रकारको टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेका छन् (उदाहरणका लागि म्याक वा विन्डोज जसले हाम्रो साइटले खास टेक्नोलोजीहरूको रूपमा काम गरिरहेको छैन भने यसलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ), कति लामो समय सम्म तिनीहरूले साइटमा खर्च गर्छन्, कुन पृष्ठ उनीहरूले हेर्छन् आदि। यसले हामीलाई निरन्तर हाम्रो वेबसाइट सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। यी तथाकथित "एनालिटिक्स" प्रोग्रामहरूले हामीलाई यो पनि बताउँदछ कि यदि मानिसहरू यस साइटमा कसरी पुग्यो भने (उदाहरणका लागि खोजी ईन्जिनबाट) र के त्यसले हामीलाई यहाँ मार्केटिंग खर्चको सट्टा तपाईंको सेवाहरू विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउन यहाँ आएका छन् कि छैनन्।
पुन: बजार कुकीहरू
तपाईंले देख्न सक्नुहुनेछ कि कहिलेकाँही कुनै साइट भ्रमण गरे पछि तपाईंले भ्रमण गर्नुभएको साइटबाट विज्ञापन संख्या बढेको देख्नुहुनेछ। यो किनभने विज्ञापनदाताहरु आफैं पनि यी विज्ञापनहरुको लागी भुक्तान गर्छन्। यो गर्नको लागि टेक्नोलोजी कुकीहरूद्वारा सम्भव भएको हो र यस्तै हामी तपाईंको भ्रमणको क्रममा एउटा तथाकथित "पुनःबजारी कुकी" राख्न सक्छौं। हामी यी विज्ञापनहरू विशेष प्रस्तावहरू आदि प्रदान गर्न प्रयोग गर्दछौं। तपाईंलाई हाम्रो साइटमा फिर्ता आउन प्रोत्साहित गर्न। चिन्ता नलिनुहोस् हामी सम्पूर्ण तपाईंसँग सम्पर्क गर्न असमर्थ छौं किनकि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अज्ञात छ। तपाईं कुनै पनि समयमा यी कुकीज अप्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ।
ईमेल न्यूजलेटर कुकीज
यो साइटले न्यूजलेटर वा ई-मेल सदस्यता सेवाहरू प्रदान गर्दछ र कुकीजहरू सम्झनका लागि प्रयोग गर्न सक्दछन् यदि तपाइँ पहिले नै दर्ता गरिएको छ र निश्चित सूचनाहरू देखाउन सक्नुहुनेछ जुन सब्सक्राइब्ड / सदस्यता खारेज भएका प्रयोगकर्ताहरू मात्र मान्य हुन सक्छ।
कुकीहरू कसरी नियन्त्रण गर्ने?
तपाईं नियन्त्रण र / वा आफ्नो इच्छा अनुसार मेटाउन सक्नुहुन्छ कुकीहरू - विवरणहरूको लागि, Aboutcookies.org हेर्नुहोस्। तपाइँ तपाइँको कम्प्युटरमा पहिले नै रहेका सबै कुकीहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ र तपाइँ प्राय: ब्राउजरहरू सेट गर्न सक्नुहुनेछ तिनीहरूलाई राख्नबाट रोक्न। यदि तपाईं यो गर्नुहुन्छ भने, तथापि, तपाईंले मैन्युअल तरिकाले केही प्राथमिकताहरू समायोजन गर्नुपर्नेछ जब तपाईं साइटमा जानुहुन्छ र केही सेवाहरू र प्रकार्यहरू काम गर्दैनन्।
यदि तपाईंसँग यस कुकी नीति बारे केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्: